रेखा रोइन् ! छविले शिल्पा र रेखालाई लिएर फिल्म बनाउने !
जीवनमा पहिलो पटक फिल्म हेरेर रोएँ, हिम्तवाली नायिकाको रुपमा चिनिएकी नायिका रेखा थापाले फिल्म मंगलम हेरेपछि प्रतिक्रिया दिइन् । मलाई फिल्मको हरेक पक्षले छोयो । प्रत्येक परिवार, श्रीमान श्रीमती र प्रेमि प्रेमिकाले हेर्नुपर्ने फिल्म मंगलम बनेको छ, रेखाले भनिन् । भिडियो हेर्नुस् ः
रेखा जोशीको नजरमा “झुम्केली बौजु” सुरेन